The Cat ( 2011 ) - Myanmar Asian TV Channel
2011 ခုနှစ်​မှာ ထွက်​ရှိခဲ့တဲ့ ကိုရီးယား horrer movie ​လေးဖြစ်​ပါတယ်​။
City Hunter နဲ့ မြန်​မာပရိသတ်​​တွေအများအပြားရရှိထားတဲ့ နာမည်​ကြီးမင်းသမီး​ချော​လေး
Park Min Young နဲ့ မင်းသား Kim Dong Wook. တို့ပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားပါတယ်​။
ဆိုယွန်​(Park Min Young)မှာ အ​ကြောက်​လွန်​စိတ်​​ရောဂါတစ်​မျိုးရှိတယ်​။
သူမက တိရ်ိစ္ဆာန်​အလှပြင်​ ဆိုင်​တစ်​ခုမှာ အလုပ်​လုပ်​တယ်​။
တစ်​​နေ့​တော့ သူမအလှပြင်​​ပေးလိုက်​တဲ့​ကြောင်​​လေးရဲ့ သခင်​မက​သေသွားတယ်​
အဲ့ဒိ​ကြောင်​​လေးရဲ့အနားမှာ က​လေးမ​လေးတစ်​​ယောက်ရှိ​နေတာကို ​တွေ့​တွေ့​နေရသတဲ့
ဂျွန်​​ဆော့(Kim Dong Wook) သ​ဒေသခံရဲတပ်​ဖွဲ့ ၀င်​တစ်​ဦးပါ။
ကဲအခုပဲ The Cat ကိုကြည့်​လိုက်​ကြရ​အောင်​….
Translator : Jue May Kyaw
File Size : 802 MB Or 513 MB
Openload.co Myanmar Large File Download Openload.co Myanmar Small File Download Soliddrive.co Myanmar Large File Download Soliddrive.co Myanmar Small File Download